Namuhla sizokutshela ngokuningiliziwe lokho alinganise dynamometer, futhi iziphi izinhlobo ithuluzi khona. Kodwa ngaphambi kokuba uphendule le mibuzo kanye neminye, kudingeka siqonde lokho okushiwo ngumuntu elithi "dynamometry". Njengoba wazi, leli gama livela ezimbili ngesiGreki: metron, ukuthi, ukukala kanye dynamis - amandla.
Kufanele kuqashelwe ukuthi yokukala avame ukusetshenziswa anthropometry, anthropology, e neuropathology, ngesikhathi Ukukhetha professional, ukutadisha zamasosha lempi, ukukhathala nokunye.
Lokho alinganise iseli umthwalo?
Kusukela bonke ngenhla, singaphetha kahle ukuthi dynamometer - idivayisi ekhethekile ngawo ngokuphelele noma ubani angaba kalula futhi ngokushesha ukukala siqu amandla abo imisipha.
By the way, ubufakazi thuluzi is kakhulu washintsha kuye ngobude futhi nobunzima umsebenzi okhokhelwayo. Uma kwenzeka ukuthi le ndlela ivumela ukuthola imiphumela ethile ngefomu yabo ingcaca, kubizwa dynamography.
Okwamanje, iyunithi uhambise eziningi onobuhle ezahlukene. Okuvame kakhulu phakathi kwazo dynamometer incwadi yezempilo, okuhloswe ngalo ukukala amandla kwemisipha esandleni. idivayisi okunjalo ngokuvamile kubizwa ngokuthi impilo, njengoba ngokuvamile isetshenziswa izibhedlela kanye nemitholampilo, ngoba yezokwelapha imishini ehhovisi Spas, zemidlalo kanye nezikole.
Nokho, impendulo yombuzo othi lokho alinganise dynamometer ongakhonza hhayi kuphela amandla kwemisipha isandla. Ngenxa kunokwehluka zale divayisi, elivame ukusetshenziswa okwesikhathi efanayo amandla nesilinganiso imilenze esifubeni kwemisipha elichaza degree of ukuthuthukiswa komuntu engozini.
dynamometer Medical: ukubukeka izibalo
Nedivaysi udokotela inhlukano enjalo kalula futhi ngokushesha lungacacisa amandla kwemisipha esandleni nesineke. Phakathi nale nqubo, oyoba zilandelana laba nezilinganiso ezimbili esandleni sisinye, bese kuvikelwe okungcono kube nomphumela omuhle kakhulu. Ukumeleleka bangaphandle zedivayisi sifana olwandisa carpal. Nokho, kubonakala kancane ezahlukene kusukela inzwa ibhodi wokulinganisa. Ngaphezu kwalokho, ingqamuzana umthwalo asakhelwanga ukuqeqeshwa okujikeleza ngenxa yokucinana kuphela ngangokunokwenzeka Manpower. Uma le nqubo wenziwa kuphela ngenxa yezizathu zempilo, izisebenzi zasesibhedlela liyadingeka ukungena Imiphumela kwilogi ekhethekile kwamabhuku.
Kufanele sisuswe ukuthola izinyathelo umgomo ngaphezulu ubukhulu eyisihlobo amandla kwemisipha. Phela, ekukhuleni kwayo ngokuhamba ukuqeqeshwa eduze ngempela kuhlobene nezinga ukukhula yemisipha futhi isisindo somzimba athlete sika. Ngokwesibonelo, ukuze ukwazi ngokuzimela anqume inani isihlobo force ezandleni yezandla zabo, babedinga ubufakazi okwakukade etholwe amakhilogremu esandleni dynamometer Medical, iphindwe ikhulu, bese yahlukaniswa isisindo emzimbeni. Ngakho, lo index kuyoba ulingana 60-70, futhi abesifazane amadoda ngaphambilini ongaqeqeshiwe - 45-50%.
Ukunqunywa amandla backbone
Kubalwa amandla izandla, ungabheka imiphumela kule umsebenzi oyisisekelo the deadlift. Kuyinto kule ukunyakaza zizobonakala kuwo wonke amandla izimfanelo zomuntu. Lokhu kungenxa yokuthi nale umsebenzi, umsubathi kuhilela yonke imisipha eyinhloko yomzimba wakho.
Ukuze afeze nesilinganiso ezinjalo, kubalulekile ukusebenzisa idivayisi ekhethekile ibukeka ifana kakhulu esiku unyawo Wegazi. Siqukethe isibambo ukuze izandla nezinyawo umlenze. Nokho, esikhundleni iziphethu, kule divayisi has a ikhebula nge esiyingqayizivele kudivayisi wokulinganisa phakathi.
ukuhlolwa inselele iwukuba ukudonsa isibambo nge amandla amakhulu kunawo wonke kungenzeka. Ukuze ukwazi ukubona amagugu ezidingekayo kufanele kube ngendlela efanayo njengoba kwaba njalo endabeni ka-wedivaysi yezokwelapha manual, ukubala ngenzuzo iba traction. Imiphumela kungahunyushwa kanje:
esingaphansi 170% - ongaphakeme;
kusuka 170% 200% - ngaphansi kwesilinganiso;
kusukela ngo-200% kuya 230% - nalasemkhatsini;
kusuka 230% kuya ku-250% - ngenhla avareji;
ezingaphezu kuka 260% - aphakeme.
Uma esikhathini uhlelo lokuqeqesha nomsubathi ukwandisa ngokuphawulekayo isihlobo amandla izinkomba, lokhu kubonisa nokwanda okuphawulekayo amandla muscle, ngokufanele, ukwanda ngamaphesenti okuqukethwe we yemisipha kakhulu.
Izinto, ngandlela-thile, ezithinta amazinga amandla
Ngo inqubo ekuhloleni ngamandla imisipha ukuzithiba, akufanele sikhohlwe ukuthi kuxhomeke ezicini ngabanye ezifana:
Isisindo umzimba lo msubathi.
Izinhlobo ukuqeqeshwa mathonya.
I degree of ukukhathala kanye nabanye.
Ngaphezu kwalokho, imisipha amandla izinkomba ingahluka kakhulu phakathi naleyo nkathi usuku lonke. Ngokwesibonelo, inani eliphansi kakhulu nasemkhakheni ekuseni nakusihlwa, futhi ngobukhulu - phakathi kosuku, okungukuthi phakathi.
Kubalulekile ukuphawula ukuthi ukwehla okukhulu amandla kwemisipha umqondo womsubathi noma esomuntukazana ngokuvamile ubonakala phakathi:
ukwephula usuku kanye nokudla;
yokuphazamiseka ngokomzwelo noma isimo omubi, njalo njalo.
Phakathi kwezinye izinto, amagugu phezu dynamometer zingancishiswa kwasebekhulile, kanye nalabo abangekho ngaphezu kweminyaka engu-40-50. Namuhla kunesimo esithi asifane ngokuvamile kubonakala abesilisa nabesifazane akuvamile wahlanganyela isiko ngokomzimba, kuhlanganise yokuzijwayeza inqubo evamile, uhamba nokunye.
Kungani sidinga ukwazi amazinga amandla?
Akuwona wonke umuntu uyazi ukuthi liphume kanjani nokuthi yini alinganise dynamometer. Nokho, kule divayisi sezokwelashwa ngempela okuhle ekusizeni labo ababonisa njalo. Ngempela, ehlelekile self-observation ivumela onobuqambi o-creative ukuthatha umsebenzi wabo wansuku zonke nendlela yokuphila enempilo bebonke. Ukwazi izinkomba amandla kwemisipha siqu, lo msubathi uyakwazi ukusebenzisa ngendlela efanele futhi esheshayo ukuqeqeshwa ngokomzimba ukuze ukuqinisa amasosha omzimba futhi alondoloze impilo, kanye ukuthuthukisa ukusebenza ngisho ukukhula okhokhelwayo.
Indlela ukunquma ocansini wosana amaqembu igazi yabazali?